ယောင်းတို့ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ For Her Myanmar ရဲ့ Giveawayအကြီးကြီး – For her myanmar
Posted on June 18, 2018 July 25, 2018 Author Wathun	Comment(0)
လူ (၃၀၀) စာတဲ့.. OMG!!!!
ယောင်းတို့ရေ… မင်မင်တို့ giveaway အကြီးကြီးလုပ်မှာ သိပြီးကြပြီဟုတ်? မသိသေးတဲ့ ယောင်းလေးတွေလည်း ရှိရင် ရှိနေဦးမှာမို့ မင်မင်က Giveaway အကြောင်းလေး အရင်ပြောပြမယ်…
ဒီ Giveaway က လူ (၃၀၀) စာအတွက် တစ်လစာ Membership တွေ မဲဖောက်ပေးမှာနော်… ကံစမ်းချင်တဲ့ ယောင်းတို့က ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပို့စ်အောက်မှာ မန်းရှင်းခေါ် (ဒီပို့စ်အောက်မှာ မန်းရှင်းရမှာ မဟုတ်ဘူးနော်.. ဒါဖြင့် ဘယ်ပို့စ်အောက်မှာ မန်းရှင်းရမှာလဲဆိုရင်တော့ ဒီ လင့်ခ် လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ထဲမှာ အသေးစိတ်လည်း ရှင်းပြထားပါတယ်လို့စ်)ပြီး ဖောင်လေးဖြည့်ပေးရုံပါပဲ… ဖောင်ဖြည့်ထားတဲ့ထဲက အချက်အလက်ပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုသာ ရွေးချယ်ကံစမ်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
Related Article >>> ပန်းပွင့်ပုံ ဆံပင်အလှဆင်ပစ္စည်းလေးတွေကို ပွဲတိုးအောင် သုံးကြည့်မယ်…
အဲ.. Membership ဆိုလို့ ဘာ မန်ဘာလဲဆိုပြီး လာမေးမှာကိုလည်း ကြိုမြင်နေတယ်လေ.. ဒီတော့ ဒါလေးလည်း ပြောပါရစေဦး… Membership ဆိုတာက Her Club ရဲ့ မန်ဘာဖြစ်ခွင့်ကို ပြောတာပါနော်.. ဒီလို Her Club ရဲ့ မန်ဘာဝင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်လတစ်ခါ Surprise Box (Her Box) လေး ရမယ်၊ ပြီးတော့ မန်ဘာဝင်တွေသာ ဖတ်ခွင့်ရှိတဲ့ Secret Content လေးတွေ ဖတ်ရမယ်၊ ပြီးတော့ For Her Myanmar ကလုပ်တဲ့ Event လေးတွေကို တက်ရောက်ခွင့် ရှိတယ်ပေါ့နော်… ဒါတော့ ယောင်းတို့တွေ သိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်…
အွင်း… သိပြီးသားတွေချည့် ပြောပြီးပြီဆိုတော့ ခု ယောင်းတို့ မသိသေးတာလေး ပြောပြမယ်… ဘာလဲဆိုတော့ ဒီ Giveaway လူ ၃၀၀ ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ တစ်ရက်တည်း ကြေညာမှာ မဟုတ်ဘဲ ဒီနေ့ (၁၈.၆.၂၀၁၈) ညနေ ၅နာရီခွဲကနေစလို့ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ညနေ ၅ခွဲတိုင်းမှာ ကံထူးရှင် ၃၀ စီကို ရွေးချယ်သွားမှာပါနော်… စနေ တနင်္ဂနွေ မပါပုပေါ့လေ.. ဒါတော့ ထိလို့မျပု ငိငိ 😛 … အဲ့ ရွေးချယ်နေတဲ့ အချိန်မှာလည်း For Her Myanmar ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် (Live လွှင့်) ပေးသွားမှာပါလို့…
Tagged For Her Myanmar, Fun, Giveaway, News
ယောင်းကို တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် ဂျပန်ရုပ်ရှင်ကား (၃)ကား
Posted on April 17, 2018 Author Miyuki
အေးအေးလေးနဲ့ ကြည့်ကောင်းတယ်ရော… မင်းသားလေးတွေလည်း ချောတယ် သိလား.. 😛
Posted on November 24, 2017 Author Yin Myanmar
အိပ်မက်ကမ္ဘာထဲမှာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် စာပေ၊ ဘာသာစကားနဲ့၊ အိပ်မက်နယ်မြေတွေ ရှိသတဲ့…
Posted on February 11, 2018 Author Sugar Cane
ဒီတစ်ခါတော့ Potterhead ယောင်းတို့အတွက် သတင်းထူးလေးလာပြီနော်။